चीन टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक निर्माता र आपूर्तिकर्ता - हाइड्रोटेक
टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरूमा पिस्टनको दुई वा बढी चरणहरू हुन्छन्। टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरमा, पिस्टन विस्तारको क्रम ठूलो देखि सानो हुन्छ, जबकि नो-लोड रिट्र्यासनको क्रम सामान्यतया सानो देखि ठूलो हुन्छ।
टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरले लामो स्ट्रोक हासिल गर्न सक्छ, र फिर्ता लिँदा लम्बाइ छोटो हुन्छ, र संरचना थप कम्प्याक्ट हुन्छ। यस्तो टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू प्राय: निर्माण मेसिनरी र कृषि मेसिनरीहरूमा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ एकै समयमा धेरै पिस्टन चलिरहेको छ। जब प्रत्येक पिस्टन एक पछि अर्को सर्छ, यसको आउटपुट गति र आउटपुट बल परिवर्तन हुनेछ।
टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू एकल-अभिनय र डबल-अभिनयमा विभाजित छन्।
डबल-अभिनय सिलिन्डरको तेल पोर्टहरूको स्थितिहरू छन्: सिलिन्डर ब्यारेलमा2तेल पोर्टहरू, पिस्टन रडमा 1 तेल पोर्ट, सिलिन्डर ब्यारेलमा 1 तेल पोर्ट, र पिस्टन रडमा दुवै तेल पोर्टहरू।
हाइड्रोटेकसँग टाई रड हाइड्रोलिक सिलिन्डर, वेल्डिङ हाइड्रोलिक सिलिन्डर, टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डर, इत्यादि सहित हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरूको पूर्ण दायरा छ। हाइड्रोटेकसँग ग्राहकहरूका लागि छनोट गर्नको लागि मानक हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरूको श्रृंखला छ, र ग्राहकहरूको विशिष्टता पूरा गर्न गैर-मानक अनुकूलन क्षमताहरू छन्। आवश्यकताहरू, जस्तै विशेष तेल पोर्टहरू। फारम, विशेष सामग्री, विशेष स्थापना विधि, विशेष प्रदर्शन, सुपरइम्पोज्ड हाइड्रोलिक भल्भ, आदि।
हाइड्रोटेक हाइड्रोलिक सिलिन्डर र हाइड्रोलिक प्रणालीहरूको उत्पादन विकास, उत्पादन र सेवाको लागि प्रतिबद्ध छ। हाइड्रोलिक उत्पादनहरूमा हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू, हाइड्रोलिक भल्भहरू र हाइड्रोलिक प्रणालीहरू समावेश छन्, जसमध्ये बहु-स्टेज टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डर प्रमुख उत्पादन हो।
हाइड्रोटेक हाइड्रोलिक सिलिन्डर र हाइड्रोलिक प्रणालीहरूको उत्पादन विकास, उत्पादन र सेवाको लागि प्रतिबद्ध छ। हाइड्रोलिक उत्पादनहरूमा हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू, हाइड्रोलिक भल्भहरू, र हाइड्रोलिक प्रणालीहरू समावेश छन्, जसमध्ये दुई-चरण टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डर प्रमुख उत्पादन हो।
हाम्रा सबै टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक परीक्षण गरिएका छन्, किनभने हामीसँग ISO9001 व्यवस्थापन प्रणालीहरूको पूर्ण सेट छ, उत्तम परीक्षण क्षमताको साथ, जुन उत्पादनहरूको उत्पादनको लागि तयार छ, त्यसैले उत्पादन अनुकूलित गर्दा उत्पादनको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। एकातिर, हाइड्रोटेक चीनमा प्रसिद्ध टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक हो। अर्कोतर्फ, यो चीनको उच्च प्रविधिको उद्यम पनि हो। त्यसमाथि, हाइड्रोटेकको आफ्नै कारखाना छ र विश्वव्यापी ग्राहकहरूलाई उत्पादनहरूको कुल समाधान उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ। यदि म अहिले अर्डर गर्छु भने के तपाईंसँग स्टकमा टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक छ? अवश्य पनि, हामीसँग हाम्रो आफ्नै कारखाना छ भन्ने आधारमा, एकै समयमा, हामीसँग प्राविधिक समर्थन प्रदान गर्न एक पेशेवर प्राविधिक टोली छ। मैले किनेको भए तिम्रो मूल्य कति होला? यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने हामी मूल्यमा कुराकानी गर्न सक्छौं। उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू किन्नको लागि हाम्रो कारखानामा स्वागत छ। सहकारिताबाट मात्रै विकास, जित र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने व्यापक भनाइ छ । हामी तपाई संग धेरै सहयोग को लागी तत्पर छौं।